प्रधानमन्त्रीको उपचार खर्च सार्वजनिक, निजीमा भन्दा अत्यन्तै सस्तो - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
प्रधानमन्त्रीको उपचार खर्च सार्वजनिक, निजीमा भन्दा अत्यन्तै सस्तो
१९ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपचार उनी आज डिस्चार्ज भए । महाराजगञ्जस्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा १० दिन लामो उपचारपछि प्रधानमन्त्री ओली बिहीबार अपरान्ह अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका हुन् । उनी डिस्चार्ज भएलगत्तै उनको उपचार खर्च पनि बाहिरिएको छ ।
एपेन्डिसाइटिस भएपछि गत मंसिर १० गते मंगलबार सेन्टरमा भर्ना भएका बिहीबार दिउँसो साढे ३ बजे प्रधानमन्त्री ओली डिस्चार्ज भएसँगै अस्पतालले उपचार खर्चबारे जानकारी दिएको हो । सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक प्रा. डा. उत्तमकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार प्रधानमन्त्रीको उपचारमा २ लाख ५४ हजार ६ सय ८८ रुपैयाँ लागेको छ ।
सरकारी अस्पताल भएकाले प्रधानमन्त्रीको उपचारमा थोरै खर्च लागेको हो । मनमोहनमा एपेन्डिसाइटिसको अप्रेसनको १५ हजार रुपैयाँ मात्र छ । यदि १० दिन निजी अस्पतालमा बसेको भए १० लाख भन्दा मुनिको उपचार खर्च नआउने यससँग सम्बन्धित विज्ञहरुको भनाइ छ ।
मंसिर १० गते मंगलबार अस्पताल भर्ना गरेर एपेन्डिसाइटिसको अपरेशन गरेपछि प्रम ओलीलाई दुई दिनसम्म भेन्टिलेटरमा राखिएको थियो । त्यसपछि प्रम ओलीलाई मनमहोन सेन्टरको पाँचौ तल्लास्थित आईसियुमा राखिएको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको साथमा एक नर्सलाई बालुवाटार पठाइएको छ । ओलीको अप्रेसनपछि लगाएका सबै टाँका फुकाइएको छ ।
Previousमुसुक्क मुस्कुराउँदै ओली बालुवाटार फर्किए
Nextनेपाललाई अर्को स्वर्ण, पौडीमा गौरिकाको कमाल